मेरो बालाई पत्र
मेरा पनि थुप्रै सपनाहरु थिए
जुत्ताको सोल छेडेर
पैतलाले भुई छुदा बिलाए
देशको राजनीतिक हावाले उडायो
केहि गर्न नसक्दाको पिडामा
उडाएका सुर्यका धुँवाहरुसँगै उडे
सपनाहरु पनि सादा
देख्न थालिएको छ ।
रंगिन सपना बर्जित छ
एउटा नमीठो कविता
रातभर आफ्नै कविता पढे
र सोचे भोली चै म जीवनको कविता लेख्छु ।
सबेरै सूर्य दाईको चियापसल
चियाभन्दा पनि बढी तात्तिएर बसेको रैछ ।
“उ त मरिछे नि ।”
छि कस्तो नमीठो झस्को पस्यो
सोधे — “सूर्य दाई के पो थियो रे उस्को नाम ?”
हो, सबैले उसलाई लाटी भन्थे
आफैलाई प्रेम ।
त्यस दिन म
मलामी गएर आएको थिएँ
तिमी पनि त अोछ्यानमा लडिरहेकि थियौ
आर्यघाटमा उ रोयो
उसको आमाको मृत देहसामु
म पनि रोए -
उसलाइ आफू सम्झे
र तिमीलाइ मृत देह ।
आएर तिम्रै छेउ पल्टे
रातभरि पिल्सि रहे
तिमी बिना म र मेरो जिवन ।।
सधैजसो आज पनि उही हिड्दा हिड्दा थाकेको पुरानो जुत्ता, मैलोले रंग फेरिएको सर्ट, च्यातिन लागेको पाइन्ट र झोलाभरी जीवनका कागजरुपी उपलब्धीहरु बोकेर निस्किएँ । हिजोजस्तै अनिश्चित गन्तव्यको सयरमा दीनभरको लागि हिडेको थिएँ । उदेश्यविहिन भएर शहरका सडकहरु र गल्लीहरु डुल्नु मेरो दिनचर्या थियो । र मलाई बस यति थाहा थियो, म आज पनि त्यहि गर्दैछु ।
उही प्रियसीका नाममा…
प्रिय तिमीलाई फेसबुकमार्फत नै यसपालिको 'भ्यालेनटाइन डे' मा प्रेम प्रस्ताव राख्दैछु। फोन गर्यो भने तिम्रो नम्बरमा फोन नै लाग्दैन। खाली तपाइले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन सकेन भन्ने सन्देश बज्छ। मलाई विश्वास लाग्दैन। फेरि दुर्इ-चार पटक तिम्रै नम्बर डायल गर्छु अनि कल सेन्टरको उही म्यासेज सुन्छु,' तपाइले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन…
प्राणान्तअघि छोरीलाई डा. वाग्लेको चिठी
दुर्गम क्षेत्रका जनताको सेवा गर्ने डा. चित्रप्रसाद वाग्ले शर्माले यो संसार छाडेको तिनबर्ष भयो । क्यान्सर रोग लागेपछि समयमै उपचार नपाएका उनको २०७० कात्तिक ७ गते निधन भएको थियो । क्यान्सरले च्याप्दै लगेपछि परिवारका सदस्यहरु भएभरको सबै सम्पत्ति बेचेर अमेरिका जान पत्नी र शुभचिन्तकले सल्लाह दिँदा उनले मानेनन् । वाग्लेले भोलि आफू पनि नरहने अवस्थामा बालबच्चा एवं पत्नीलाई सडकमा ल्याउन चाहन्न, बरु…
बारपाक, स्वस्थानी र डिलकुमारी!
कागज समातिरहेका मेरा हातमा एक्कासी हतकडी लगाइयो। के भइरहेछ, किन भइरहेछ केही थाहा पाउन सकिन के बोलु के भनुम्, अंह! मलाई थाहा भएन। यतिकैमा म नजिकै उभिएका एकजना प्रहरीले मलाई हतकडी लगाउनेसंग उहाँलाई भ्यानमा हाल्नुस् भनेर आदेश दिएपछि मात्रै म होसमा आएँ। के भयो? किन हतकडी लगाउनुभएको मलाई? कागज समातिरहेका मेरा हातमा एक्कासी हतकडी लगाइयो। के भइरहेछ, किन भइरहेछ…
जयश्वर रिमाल, सांझको ५:०० बजेको थियो । हामी कोपन्हेगन शहरमा घुम्दै थियौं। मेरो लागि यस शहर नयाँ भएकोले अल्लीबेर म यहाँ रुमल्लिरहन र यहांको बारेमा धेरै जान्न समेत चाहन्थेँ। कुनै बेलाको मेरो विद्यार्थी मदन ओली मेरो गाइड बनिरहेको थियो। चार वर्ष देखि डेनमार्कमा बसोबास गरेको हुनाले उसलाई यहाँको सबै कुरा थाहा छ। त्यसैले पनि म दंग परिरहेँ।
सिंहदरवार र नक्कली जर्सावहरु
टेकराज शाही,जति वेला म स्कुले जिवन विताईरहेको थिए देश एक फरक राजनितीक चक्रव्युहमा थियो । गाँउहरु माओवादी ईशारामा चल्थे । यति सम्मकी त्यो वेलाको शाही नेपाली सेना गाँउ पस्दा समेत हामी सोझा नागरीक हरुलाई सुरक्षाको नाममा कता भगाउने भन्ने सम्मको चावी त्यो वेलाको माओवादी कार्यकर्ताहरुको हातमा थियो । जव सेना गाँउ पस्थ्यो हामी भागेर अर्के दिशा तर्फ जानु पथ्र्याे…
खाडीमा निसास्सिएका सपना
खेत बन्दगी राखी पाखाबारी बाँझो छोडेर
मुसलधारे बर्षातमा निस्क्यो छाता ओढेर
पुर्ख्यौली माटोले जीवन नचल्ने देखेपछी
हिँडयो घर धान्नलाई अरबतिर ढुंगा फोडेर
जनवाद ल्याए सुधार आउँछ भन्थे जनवादी
तर उसले केही पाएन दस बर्ष बन्दुक बोकेर
गहभरी आँसु पारेर दुख गर्दैछ बिरानो भुमिमा
निसास्सिएका केही झिना तिनै…